[Tư vấn] Nên mua nồi cơm điện hãng nào tốt nhất hiện nay 2021 | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Tư vấn] Nên mua nồi cơm điện hãng nào tốt nhất hiện nay 2021 | Muasalebang in Muasalebang
Abapheki belayisi namuhla bangenye yezinto ezibalulekile kuyo yonke imizi. Kodwa-ke, namuhla, izinhlobonhlobo zamamodeli nezinhlobo zenza abathengi bazizwe bedidekile lapho bengazi ukuthi iyiphi i-rice cooker okufanele bayithenge ukusiza ukupheka irayisi kangcono.
Ukukusiza ukuthi uhlukanise umpheki othile werayisi muhle noma cha, singathanda ukwabelana ngolwazi lwethu nawe ukuze uthole ukuthi yiluphi uhlobo lwesipheki selayisi esingaluthenga namuhla.
1 1. Izinhlobo zabapheki berayisi ezitholakala emakethe
1.1 Yini umpheki werayisi kagesi?
1.2 Iyini i-electronic rice cooker?
1.3 Iyini i-high-frequency rice cooker?
2 2. Zizwa ngokukhetha ukuthenga umpheki omuhle werayisi
2.1 Khetha ukuthenga umpheki werayisi ngentengo
2.2 Khetha ukuthenga i-rice cooker ngokusho komthamo osetshenzisiwe
2.3 Khetha ukuthenga i-rice cooker ngokusho komsebenzi kanye nobuchwepheshe
2.4 Khetha ukuthenga i-rice cooker ngokusho kwempahla yebhodwe elingaphakathi
2.5 Ungathenga kuphi izipheki zelayisi ezishibhile nezingcono kakhulu
3 3. Iluphi uhlobo olungcono kakhulu lwe-rice cooker ongaluthenga namuhla?
3.1 I-rice cooker ebukhali
3.2 I-Panasonic rice cooker
3.3 I-Toshiba rice cooker
3.4 I-Sunhouse rice cooker
3.5 I-Cuckoo rice cooker
1. Izinhlobo zabapheki berayisi ezitholakala emakethe
Imikhiqizo yamanje yokupheka irayisi emakethe yehlukene ngomklamo, uhlobo namanani. Kodwa ngokuyisisekelo zihlukaniswe ngezinhlobo ezi-3 ezivamile okuyizi:
– Isipheki serayisi sikagesi.
– I-electronic rice cooker.
– I-high frequency rice cooker.
Uhlobo ngalunye lunezinzuzo nezinkinga ezihlukahlukene, kuye ngezidingo zomkhaya ngamunye.
>> [Tư vấn] Iluphi uhlobo olungcono kakhulu lwesipheki serayisi esingenashukela ongasithenga?
Zizwa ngokukhetha ukuthenga uhlobo olungcono kakhulu lwesipheki serayisi namuhla
Yini umpheki werayisi kagesi?
Ulayini weziko lokuphekela irayisi (izipheki zelayisi ezisezinkinobho) ezisebenza ngokususelwe kumshini wokudlulisa amandla, okwazi ukunqamula amandla nokushintsha ngokuzenzakalela ukuze kugcinwe imodi efudumele uma izinga lokushisa elithile selifinyelelwe. Lo mugqa womkhiqizo njengamanje unezinguqulo ezi-2: umpheki werayisi onesivalo esikhiphekayo kanye nompheki werayisi onesivalo.
– Ukuhlukahluka, kucebile ngamamodeli kanye nezinhlobo.
– Ifanele zonke izidingo cishe yonke imindeni ngenxa yenani eliphansi ngentengo engaphansi 1 million.
– Simple, kulula ukuyisebenzisa.
– Ukusebenza okulinganiselwe.
– Asikho isici sesikhathi.
– Kunzima ukulungisa inani lamanzi.
Iyini i-electronic rice cooker?
Ulayini omusha wabapheki berayisi onephaneli yokulawula ye-elekthronikhi yokulawula izindlela zokupheka. Njengamanje, ulayini we-electronic rice cooker usebenzisa iphaneli yokulawula enezinkinobho zemishini nezinkinobho zokuthinta.
– Idizayini yesimanje
– Multi-function, ngaphezu komsebenzi ojwayelekile wokupheka irayisi, ungakwazi ukupheka iphalishi, isobho, ibhodwe elishisayo … noma wenze amaqebelengwane afana nokwenza i-flan, i-gato noma ikhekhe lesipontshi.
– Isici sesibali sikhathi kanye nesici sokulungisa isikhathi sokupheka.
– Intengo iphakeme kune-mechanical rice cooker, ngokuvamile intengo izoba ngaphezu kwe-1 million VND.
– Isikhathi sokupheka side, cishe imizuzu engama-30-45/isikhathi.
– I-bulky eyengeziwe enomthamo omkhulu kakhulu.
– Ukuhlanza, ukuhlanza kunzima.
Xem Thêm Top 8 mặt nạ bùn hiệu quả, an toàn nhất trên thị trường | Muasalebang
Jabulela ukuthenga umkhiqizo ohamba phambili we-rice cooker – i-electronic rice cooker
>>> Imininingwane: Iyini i-electronic rice cooker? Ingabe kufanele ngithenge i-electronic rice cooker?
Iyini i-high-frequency rice cooker?
Njengasesihlokweni Yini i-high-frequency electric rice cooker? Sikwenze kwacaca kakhulu, sicela ubuyekeze. Lapha i-Cho Lon Electronics izohlaziya izinzuzo nezingozi zabapheki berayisi abanemvamisa ephezulu.
– Ukusebenzisa ubuchwepheshe bokungeniswa okuvela ku-Fuzzy Logic ukusiza irayisi ngokulinganayo nangokumnandi.
– Idizayini yesimanje, isitayela nenhle.
– Ifakwe izindlela eziningi zokupheka ezizenzakalelayo ukuze zinikeze iningi lezidingo zokucubungula ukudla zomndeni.
– Ukwakhiwa kwebhodwe langaphakathi eliwugqinsi kufanele kukwazi ukugcina ukudla kufudumele isikhathi esingaphezu kwamahora angu-5.
– Inenani eliphakeme kakhulu, ngokuvamile elingaphezu kwezigidi ezi-4 ze-VND
– Kunzima ukuyisebenzisa ngoba ibhodwe lisebenzisa isiNgisi noma isiJapanese, isiKorea.
– Ukulungisa kunzima ngoba azikho izingxenye ezisele.
>>> Bona okuningi: Indlela yokukhetha umpheki werayisi oqinile onemvamisa ephezulu
Kuleli qophelo, kufanele ukuthi ube nokuzikhethela ukuthi yiluphi uhlobo lwesipheki selayisi ongasithenga, akunjalo? Kodwa futhi udinga ukubhekisela kwezinye izindlela ezimbalwa zokukhetha umpheki welayisi ongcono kakhulu.
2. Zizwa ngokukhetha ukuthenga umpheki omuhle werayisi
Khetha ukuthenga umpheki werayisi ngentengo
Intengo yompheki werayisi nayo iyisici esibalulekile futhi inquma ukuthi abasebenzisi bakhetha ukusebenzisa lowo mkhiqizo noma cha. Ikakhulukazi kumakhasimende afuna ukukhetha umpheki werayisi ukuze ahlangabezane nezidingo zawo futhi abe nesabelomali esiphusile
E-Cho Lon Electronics Supermarket, sivame ukuthola imibuzo evela kumakhasimende lapho sikhetha umpheki werayisi njenge:
Ukuze uphendule imibuzo yamakhasimende evame ukubuzwa mayelana nokuthenga umpheki omuhle werayisi, sicela uchofoze embuzweni okulungele.
Khetha ukuthenga i-rice cooker ngokusho komthamo osetshenzisiwe
Uma i-rice cooker inkulu, uzodla ugesi omningi. Ngakho-ke, ukukhetha umpheki werayisi onekhono elifanele kuzosindisa ugesi ongadingekile emndenini.
Jabulela ukuthenga izipheki zelayisi ngomthamo
Umthamo othile we-rice cooker ngokwenani labantu emndenini ongahle ubhekisele kubo:
Umndeni onabantu abangaba ngu-1-2: Khetha ibhodwe elinomthamo wamalitha angu-0.6-0.8.
Imindeni enabantu abangaba ngu-2-4: Khetha ibhodwe elinomthamo wamalitha angu-1-1.5.
Imindeni enabantu abangaba ngu-4-6: Khetha ibhodwe elinomthamo wamalitha angu-1.8-2.
Imindeni enabantu abangaba ngu-6-8: Khetha ibhodwe elinomthamo wamalitha angu-2.2-2.5.
Khetha ukuthenga i-rice cooker ngokusho komsebenzi kanye nobuchwepheshe
Ngaphezu komsebenzi oyinhloko wokupheka irayisi, umpheki werayisi uneminye imisebenzi esekelayo njengokuthi: ukupheka iphalishi, isobho lokupheka, ukwenza amaqebelengwane, imifino ebilisiwe … Ngezinhloso eziningi, umsebenzi wayo nawo uvulekile. Inwetshiwe ngamamodi: ngokushesha , kancane, shisa kabusha, ukupheka isikhathi…
Ngomshini wokupheka werayisi, usengakwazi ukupheka iphalishi noma ubilise imifino, kodwa ngenxa yokuthi kunemodi yokupheka engu-1 kuphela, kufanele uhlole njalo futhi ushintshe imodi yokufudumala uma kudingeka ukuze ugweme isimo sokuthi umpheki werayisi usebenza ngemodi ephansi. isikhathi eside kakhulu singabangela ukuqhuma…
Ubuchwepheshe obusha bamanje abapheki belayisi bahlangabezana ngokugcwele nezidingo ezingenhla, abasebenzisi abaziniki isikhathi sokuhlola njalo, vele ulungise imodi yokupheka ukuze ihambisane nezidingo zabo.
Njengamanje, abapheki berayisi banobuchwepheshe obuningi obufana nobuchwepheshe bokupheka be-Fuzzy Logic, ubuchwepheshe bokupheka be-2D (indawo yonke), i-3D (yesimanje).
Khetha ukuthenga i-rice cooker ngokusho kwempahla yebhodwe elingaphakathi
Kumele kuqashelwe ukuthi izinga lelayisi lapho ukupheka lizoxhomeka ezintweni zebhodwe elingaphakathi. Ngaphezu kwalokho, impahla yebhodwe yangaphakathi nayo ithinta impilo yomsebenzisi. Liyini ibhodwe lekhwalithi enhle? Kuzoncika ku-3 criteria abafana: impahla yegobolondo lebhodwe, ibhodwe langaphakathi nepuleti lokushisa.
Izinto zegobolondo lebhodwe:
Abapheki bangempela berayisi banegobolondo elibushelelezi kakhulu, ubukhali, i-gloss kanye namaphethini acacile, izikulufu azigqwalile.
Kunini lapho okungafanele uthenge khona umpheki werayisi:
– Ibhodwe linegobolondo langaphandle eliklwetshiwe phakathi nokuhamba budedengu.
– Ibhodwe linegobolondo elinopende oxebukayo, izinga eliphansi.
– Ibhodwe alivalwanga futhi alingeni emzimbeni. Lezi zimbiza azipheki kahle irayisi kanye nezindleko zokusetshenziswa kwamandla.
Impahla yebhodwe langaphakathi:
Ukuqinisekisa impilo yakho nokupheka kangcono, kufanele ukhethe umpheki werayisi onebhodwe langaphakathi elenziwe ngezinto ezingabambeki: ingxubevange ye-aluminium, ingxubevange ye-aluminium enoqweqwe lwawo olungeyona intonga, insimbi enoqweqwe oluqinile. , I-Aluminiyamu isitembu ngoqweqwe lwedayimane olungagxili, ibhodwe elingaphakathi lengxubevange elinezingqimba eziningi elinoqweqwe olungenanduku.
Zizwa ngokukhetha ukuthenga umpheki werayisi ohamba phambili ngokwezinto zebhodwe elingaphakathi
Ipuleti lokushisa kufanele likhethe into ecwebezelayo, ligweme ukukhetha indawo engaphansi ebhodweni eline-concave engalingani kanye nokugqwala. Ipuleti lokushisa kufanele liqine ngoba lizothinta ukudluliswa kokushisa lapho kupheka. Njengamanje, kunamapuleti okufudumeza adumile angu-3: isitsha selayisi esiyipuleti eli-1, ibhodwe eline-heater engu-2 kanye nebhodwe le-heater elingu-3. Ukuphakama kwepuleti lokushisisa, kuyanda izindleko zomkhiqizo, futhi ikhwalithi nayo ilingana nenani lamapuleti okushisa.
Ungathenga kuphi izipheki zelayisi ezishibhile nezingcono kakhulu
Isimo sabapheki berayisi mbumbulu bekhwalithi ephansi kakhulu kangangokuba ukukhetha umkhiqizo wangempela onemvelaphi ecacile kuzoqinisekisa ukuphepha ngesikhathi sokusetshenziswa.
Thenga i-rice cooker ehloniphekile lapho ifika newaranti. Lokhu akuvamile kakhulu kubantu abaziyo ukuthi bangawathengaphi ama-rice cookers angempela anekhwalithi, iwaranti, ukunakekelwa, ukwesekwa kobuchwepheshe, njll. Ungakhethi ukuthenga ama-rice cookers ezindaweni ezincane ngenxa yenani elishibhile. Yiya lapho noma ukhethe ukuthenga endaweni enedumela elihle. izikhungo zikagesi ezinezinqubomgomo nemithetho ecacile nesobala.
Amakhasimende e-Cho Lon Electronics angathinta Ucingo Lwezinkonzo Zekhasimende 028.3856 3388 (8:30 – 21:00) noma athinte igatsha eliseduze le-Cho Lon Electronics. Ungabhekisela ekhelini legatsha lapha.
3. Iluphi uhlobo olungcono kakhulu lwe-rice cooker ongaluthenga namuhla?
I-rice cooker ebukhali
Abapheki berayisi ababukhali banemigqa ehlukahlukene yomkhiqizo kusukela kokudumile okungaphansi kuka-500 ukuya kwemaphakathi nebanga kanye nemikhiqizo esezingeni eliphezulu efika ezigidini ezimbalwa/umkhiqizo.
Iningi labapheki berayisi ababukhali eVietnam bakhiqizwa eThailand, abathathwa njengezekhwalithi enhle, ezihlala isikhathi eside ngokwedlulele, futhi zibiza kancane kakhulu ukulungisa nokugcinwa.
Amanye amamodeli avelele we-Sharp brand rice cookers:
>>> Bona okuningi: Imikhiqizo yokupheka irayisi ebukhali e-Cho Lon Electronics
I-Panasonic rice cooker
Ibhrendi ye-Panasonic ijwayeleke kakhulu kubathengi ngemikhiqizo yasendlini efana nale: ama-TV, iziqandisi, imishini yokuwasha, ama-air conditioner… Ikakhulukazi, izipheki zelayisi nazo zinezinhlobonhlobo zamamodeli asuka kumshini wokuphekela irayisi (izivalo). isibambiso nesivalo esikhiphekayo), i-electronic umpheki werayisi. Ulayini womkhiqizo oqinile noyinhloko we-Panasonic ugxile kakhulu kubapheki berayisi abanemvamisa ephezulu enenani eliphezulu kakhulu lezigidi ezingu-10 noma ngaphezulu.
Amanye ama-Panasonic rice cookers ajwayelekile:
>>> Bona okuningi: Imikhiqizo ye-Panasonic rice cooker e-Cho Lon Electronics
I-Toshiba rice cooker
Ulayini womkhiqizo we-rice cooker ka-Toshiba waziswa kakhulu abasebenzisi ngokuklama kwawo okuhlakaniphile, imodi yokupheka okuningi, kanye nokusebenziseka kalula. Ungomunye wabapheki berayisi abathengiswa kakhulu eVietnam ngemuva kohlobo lwe-Sharp.
Abanye abapheki belayisi abajwayelekile baseToshiba:
>>> Bona okuningi: Imikhiqizo ye-Toshiba rice cooker e-Cho Lon Electronics
I-Sunhouse rice cooker
I-Sunhouse rice cooker iwuphawu lwaseVietnam obeludumile eminyakeni yamuva nje. Imikhiqizo yokupheka irayisi yalolu hlobo ishibhile kakhulu, ngakho-ke ifaneleka kakhulu kubathengi abaningi baseVietnam.
Abanye abapheki belayisi abajwayelekile bohlobo lweSunhouse:
>>> Bona okuningi: Imikhiqizo ye-Sunhouse rice cooker e-Cho Lon Electric Machine
I-Cuckoo rice cooker
Kuwumkhiqizo owaziwa kakhulu eminyakeni yamuva nje. Njengamanje, imikhiqizo yalolu hlobo inemigqa emi-2: umugqa ongu-1 wezipheki zasekhaya ze-Cuckoo zerayisi kanye nomugqa ongu-1 wokupheka ilayisi ongenisiwe.
Izici ze-Cuckoo rice cooker ukufudumeza kwezindlela ezine, izindlela zokupheka eziningi, ukugcinwa okuhle kokushisa.
Umpheki werayisi wale nkampani futhi unemikhiqizo ehlukahlukene kusukela kumakhulu ambalwa ezinkulungwane kuya emikhiqizweni ephezulu yamashumi ezigidi zama-dong.
Abanye abapheki belayisi be-Cuckoo abajwayelekile:
>>> Bona okuningi: Imikhiqizo ye-Cuckoo rice cooker e-Cho Lon Electronics
Isipiliyoni sokuthenga umpheki werayisi ongcono kakhulu – umpheki werayisi uCooku
Ngaphezu kwalokho, imakethe yokupheka irayisi nayo inemikhiqizo evela kwezinye izinhlobo ezifana nalezi: Happycook rice cooker, Midea rice cooker, Hitachi rice cooker, Bluestone rice cooker, Philips rice cooker, Electrolux rice cooker… nakho kuyakufanelekela ukunakwa.
Ingabe i-Electrolux rice cooker inhle? Kufanele ngiyithenge?
Ingabe i-Philips rice cooker inhle? Kufanele ngiyithenge?
Ingabe i-Midea rice cooker muhle? Kufanele ngiyithenge?
Ingabe i-HappyCook rice cooker muhle? Kufanele ngiyithenge?
Ingabe i-Hitachi rice cooker muhle? Kufanele ngiyithenge?
Manje nje indlela yokukhetha uhlobo olungcono kakhulu lwesipheki selayisi ngokusekelwe kokuhlangenwe nakho kwethu ohlelweni lokuthenga kanye nolwazi lwethu lokusebenzisa izipheki zelayisi. Ngethemba ukuthi uzolithola ithuna
Bột tàn mì là gì? Công dụng của bột tàn mì và các món ăn ngon | Muasalebang